2PLUS | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / 2PLUS
Category Archives: 2PLUS
TwoPluz – နတ်သမီး
၁. မရေရာတဲ့စာမျက်နှာ ၂. မျက်ရည်အနမ်း ၃. လမ်းခွဲ ၄. ဂရုမစိုက်နဲ့ ၅. ကမ္ဘာကြီးနဲ့ မတည့်တဲ့သူ ၆. အကြောက်ဆုံးပဲ ၇. ဝေးရ ၈. ဝေးဝေးနေပေးပါ ၉. နတ်သမီး ၁၀. လူကီးမီးယား (Leukaemia) ၁၁. တငွေ့ငွေ့ ၁၂. မမုန်းပါနဲ့ချစ်သူ (Bonus Track)
October 2, 2010 swordfish 2PLUS Leaveacomment
August 1, 2010 ဆုမြတ်မိုး 2PLUS ဖေသက်လွင် ဇေဦးသာ 2PLUS 24 Comments
2Pluz ရဲ့နတ်သမီး Sample ခွေပါ.. MMA မှာ…ဒီ Album ရှိတော့ ရှိပါတယ်..Download ချလို့ မရကြဘူး ဖြစ်နေလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… Download မရေရာတဲ့ စာမျက်နှာ http://www.mediafire.com/?homimgmnimy ဝေးဝေးနေပေးပါ http://www.mediafire.com/?dmzwz2ttz5x ဝေးရန် http://www.mediafire.com/?tmuho2kminz သိပ်ချစ်တယ်(2005)Remix http://www.mediafire.com/?oxxcnzzgaot Download All Tracks http://www.mediafire.com/?tlmzdc5mktz
May 4, 2010 blackparade85 2PLUS2Comments
Two Plus – အပေါင်း(၂)
၁။ လွဲချော်ခြင်း ၂။ အချစ်ရဲ့ဆွဲအား ၃။ သိပ်ချစ်တယ် ၄။ မသိခြင်းများ ၅။ ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့စကား ၆။ ကျေးဇူးပြု၍လက်ခံပေးပါ ၇။ တမ်းတဆဲပါ ၈။ တစ်ဖက်သတ်အချစ် ၉။ ကျောင်းကဇာတ်လမ်း ၁၀။ မီး ၁၁။ ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့စကား
January 18, 2008 mmsong 2PLUS အခွေ (တကိုယ်တော်) ဖေသက်လွင် ဇေဦးသာ4Comments